हिट भयो ‘धनपति’ ?
असार २३ गतेबाट अल नेपाल प्रदर्शन आएको फिल्म ‘धनपति’ले हिजो शुक्रवारबाट दोस्रो हप्तामा प्रदर्शन आरम्भ गरेको छ । खगेन्द्र लामिछाने अभिनित फिल्म ‘धनपति’ले प्रदर्शनको दुईदिनमा करोड ग्रस विजनेश गरेको खबर प्राप्त भएको थियो । पहिलो हप्ता सुखद व्यापार गरेको ‘धनपति’ले दोस्रो हप्तामा पनि राम्रो दर्शक पाउने निर्देशक दीपेन्द्र के. खनाल बताउँछन् ।
फिल्मीखबर डटकमसँग कुराकानी गर्दै खनालले भने, ‘पहिलो हप्तामा नै हामीले फिल्मको लगानी सुरक्षित गरिसकेका छौं । दोस्रो हप्ताको पहिलो दिन शुक्रवार र दोस्रो दिन शनिवार पनि ‘धनपति’मा राम्रो दर्शक छन् ।’ उनले हिजो शुक्रवारबाट प्रदर्शनमा आएका दुई नेपाली फिल्म र एक बलीउड फिल्मले ‘धनपति’लाई असर नगर्ने पनि बताए । उनी अगाडि भन्छन्, ‘हिजो रिलिज भएका फिल्मभन्दा ‘धनपति’ विल्कुलै फरक छ । दर्शक पनि फरक छ । त्यसैले ‘धनपति’लाई हिजोबाट प्रदर्शन सुरु गरेका नेपाली र बलीउड फिल्मले असर गर्दैन ।’
यस्तै, कलाकार एवं लेखक खगेन्द्र लामिछानेले दर्शकहरुबाट पाएको प्रतिक्रियाले उत्साहित भएको बताए । उनले भने, ‘फिल्मले कति व्यापार गर्‍यौं, हिट भयो कि भएन भन्ने कुरामा मेरो खासै ध्यान जाँदैन । दर्शकहरुले फिल्म रुचाउनुभयो कि भएन भन्ने मात्र सोच्छु । समय मिलाएर हलहरुमा दर्शकहरुको प्रतिक्रिया पनि लिन गइरहेको छु । र, दर्शकहरुबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छु ।’